Safari " Journey-Assist - Loza avy amin'ny Safari. Safari eto amin'izao tontolo izao.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Safari
Mampiavaka ny fitsangatsanganana safari
Safari tany Afrika
Safari tany Brezila
Loza miandry ny tia safari
Inona no atao hoe safari?
Ny safari dia fitsangatsanganana an-fiara na aotobisy manokana hamakivaky ireo faritra sahaza azy - tahiry, ala, zaridaina, toeram-pialofana biby sy zavatra hafa mitovy amin'izany. Ny fototr'ity dia ity dia ny fandinihana ny biby amin'ny fonenany voajanahary. Araka izany, safari no fitsangatsanganana an-biby. Matetika i Safari dia miaraka sary fizahan-tanyampidirina amin'ny totalin'ny vidin'ny fitsangatsanganana.
Ny fandaminana ny fitsangatsanganana safari dia asongadin'ny fahasarotana be, noho io antony io dia mahatratra hatramin'ny an'arivony dolara ny vidiny. Ny vondrona mpizahatany dia miaraka amin'ny mpitari-dalana izay ny andraikiny dia misy fanampiana amin'ny toe-javatra mampidi-doza sy tantara momba ny biby. Matetika, mpiaro ny zaridaina, siantifika, vazaha, na solontena amin'ny asa iray hafa mahakasika ny fandinihana ny bibidia dia lasa mpitari-dalana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpitari-dalana dia mety ho olona iray eo an-toerana fotsiny izay mahalala ny faritany sy ny biby izay miaina eo aminy mandritra ny androm-piainany.
Ny vondrona mpizahatany tsirairay dia voatery miaraka amina matihanina izay mahalala tsara ny faritany ary indrindra ireo biby mipetraka eo. Izany dia miantoka fiarovana ho an'ny mpandray anjara safari.
Ny alina dia azo atao amin'ny iray amin'ireo hotely eo an-toerana ao amin'ny zaridainam-pirenena na ao anaty lay. Ny alina any amin'ny trano fandraisam-bahiny dia midika fampiononana bebe kokoa, ary ny matory ao anaty lay dia miaraka amin'ny tantaram-pitiavana manokana, satria loza ateraky ny mpizahatany mifanena amin'ny bibidia, ohatra, mandeha any amin'ny trano fidiovana. Na izany aza, ny mpiambina dia ho vonoin'ireo olona voaofana manokana.
Afaka mandeha manodidina ny faritany amin'ny fiara fitaterana manokana ianao. Izy io dia mora kokoa noho ny anaty jeep, na izany aza, noho ny haben'ny vondrona mpizahatany, indraindray dia miandry ela ireo mpandray anjara tara ianao. Noho izany, jipisy misy toromarika ho an'ny mpizahatany maro dia safidy mora kokoa kokoa. Lafo kokoa izany, fa hanome fotoana hahitana mihoatra noho ny mandehandeha mivory lehibe.
Ny toerana fitsangatsanganana safar malaza indrindra dia ny valan-javaboary misy firenena An'i Afrika... Any ianao dia afaka mihaona biby hafakely - elefanta, leoparda, liona, antilopa, sns Safari fitsidihana Africa manoro hevitra ny vaksiny sasany. Ny vidiny dia faritana amin'ny fonosana serivisy manokana.
Ny tena malaza dia ny faritra atsimo sy atsinanana amin'ny kaontinanta mainty. Any amin'ireny firenena ireny, ny mponin'ilay metropolika dia afaka mahatsapa ho toy ny ampahany amin'ny toetra tsara indrindra. Nandritra ny fitsangatsanganana safariorikanina afrikanina, ny mpandray anjara dia mihodina manodidina ny zaridainam-pirenena amin'ny fiara na amin'ny fiara fitaterana, ampiarahina torolalana manokana.
Ny ampahany lehibe amin'ny zaridainam-pirenena dia mifantoka amin'ny Kenya. Safari in Kenya Manokatra fahafahana lehibe izany hitrandrahana ny kolontsaina Masai taloha, ary koa amin'ny fialan-tsasatra amin'ny torapasika tsara tarehy.
Fa mandeha safidra amin'ny NamibiaAfaka mahita ny dongona avo indrindra eto an-tany ianao. Misy efitra roa eto amin'ity firenena ity - Namib sy Kalahari.
Any amin'ny faritany Afrika Atsimo Safarisika azo tanterahina tsy any an-tanety ihany fa ao anaty rano koa. Shark safaris dia tsy hamela olona tsy hiraharaha.
Fitetezam-paritany Safari Tanzania ahafahanao mifankafantatra amin'ny karazana biby isan-karazany faran'izay lehibe. Rehefa mandeha mitety ity firenena ity ianao dia afaka mahita biby toy ny elefanta, giraffe, buffalos, rhinos, leopards, liona, baboons ary hippos.
Misy karazany 2 amin'ny safariana afrikanina: fohy safarian'ny mpandeha и fitsangantsanganana lava.
Ny safira vetivety dia mahavita fitsangantsanganana fohy ao anaty zipo iray misokatra miaraka amin'ny mpamily iray. Nandritra ny andro maromaro, ny mpandray anjara amin'ny maraina mody miala amin'ny efitra na savannah, miverina amin'ny hariva mankany amin'ny hotely na trano lay.
Ny fitsangatsanganana lavitra dia karazana fitsangatsanganana mihoa-pampana, izay ana vondrona mpizahatany mahatratra hatrany amin'ny 3 km ao anatin'ny 000 herinandro anaty jip mihidy na misokatra.
Safari in Africa manisy fitaovana. Ireo akanjo ireo dia tsy natao ho an'ny mafana fotsiny, fa koa amin'ny andro mangatsiaka (satria ao Africa misy ny fihenan'ny mari-pana mafana mandritra ny andro), ny kapa sy kiraro mampitony. Handray anjara amin'ny safari in Namibia, Afrika Atsimo, Zimbaboe, Zambia и Botsoanatsy ilaina ny fanaovana vaksiny, na izany aza dia toy izany ihany Kenya, Malawi, Oganda na Tanzania Midika izany ny tsy fahazoana taratasy fanamarinana vaksiny mavo. Voarindra vaksiny avy amin'ny hepatitis A sy B, tetanus, cholera, polio, meningitis.
Safari in Aostralia
Mitombo ny tinady any Safari any Aostralia. Ny fotoana tsara indrindra ho azy dia ny volana May ka hatramin'ny Oktobra. Amin'ny fotoana nanjakan'ny ririnina any Eropa, avy eo ny orana any avaratr'i Aostralia, mahatonga lalana maro tsy azo tanterahina.
Mandritra ny safari iray ao amin'ny Red Center ao amin'ny tanibe Aostraliana, dia afaka mijery ny efitr'i Tanami ianao, mamakivaky ny Valan-javaboary Uluru-Kata-Tjuta, Royal Canyon, ary hijery ny McDonnell Mountains.
Mitsimbina safari eny amoron'ny morontsiraka lehibe, dia afaka maka sary an-tsambo sy mponin'ny ranomasina hafa.
Safari in Aostralia dia mila ny fitaovana manaraka: fakantsary, akanjo natao ho an'ny andro mafana, kapa sy fehikibo mampahazo aina. Tsy maharatsy ny maka bôka lava, satria rehefa avy ny orana dia sarotra ny mamindra amin'ny lalana maro.
Safari in Brezila
Ny ala tropikaly an'i Brezila dia mifantoka amin'ny faritr'i Amazona. Any ianao dia afaka mandray anjara amin'ny iray amin'ireo safarisita mahavariana indrindra eto an-tany.
Pantanal dia iray amin'ireo faritra mahaliana indrindra any atsimo sy afovoany. Brezila. Ny karazana flora sy ny biby dia mampiavaka azy. Raha tonga eto ianao dia afaka mahita ireo mponin'ny tany eo an-toerana toy ny caimans, piranhas, anacondas, boloky goavam-borona, mpihaza ary mpankafy.
Raha momba ny fitaovana: fitafiana manarona kitrana sy fehin-kibo dia tena ilaina. Ireo kiraro fitondra rano, ny moka ary ny fonon-tànana maivana dia ilaina ihany koa. Ankoatr'izay, tokony haka akanjo mafana ianao handehanana any Amazona amin'ny hariva.
Any Afrika, any Amazon, dia tokony ho mailo ianao. Aza miala sasatra. Tokony ho fantatrao fa maro amin'ireo mponina no miaina ambanin'ny fahantrana, ary tsy izy rehetra no tsara fanahy araka ny fijeriny. Izay tsiky dia afaka manafina fikasana ratsy. Misy fepetra io fandrahonana io. Aza malahelo tsy hino ny olona rehetra. Amin'ny ankapobeny, ny olona eo an-toerana dia tso-po sy madio am-panahy. Na izany aza, tokony hitandrina ianao.
Matetika, ny bibikely no singa mampidi-doza indrindra amin'ny safari. Maro amin'izy ireo no mety ho mpitondra aretina tena mampidi-doza. Alohan'ny dia toy izany dia manatona ny dokotera ary aza atao ambanin-javatra ny filàna fanaovana vaksiny naroso. (tsy mitovy amin'ny faritra tsirairay)
Raha tonga any Afrika mafana ianao avy amin'ny antokon-taona, tadidio fa tsy tsara tarehy ihany ny masoandro mafana, fa mampidi-doza ihany koa. Ny fihomehezana mafana sy masoandro dia mampidi-doza ho an'ny zavamananain'ny olombelona tsy zatra ny fepetra toy izany.
Matetika, ireo firenena sy faritany azon'ny safidim-bola dia ireo firenena izay ny fitsipika momba ny fahadiovan'ny rano sy ny sakafo dia mety tsy hitovizany amin'ny mahazatra.
Mazava ho azy fa safari ho an'izany ary safari iray ahafahanao mankasitraka ny biby ao amin'ny tontolo niaviany, ary tsy ao amin'ny zoo. Saingy tsy tokony hadino isika fa maro amin'ireny biby ireny no tena mpihaza, ary ireo vatan-jaza dia tsy mety mampidi-doza. Mandehandeha amim-pitandremana ary tsy mamporisika ny biby ho resabe.
Safari dia voalohany indrindra, olom-pantatra sy fifandraisana amin'ny natiora virijina, miaraka amin'ny hatsarany sy ny mponina ao aminy. Matetika, ny olom-pantatra toy izany dia feno traikefa nahafinaritra miaraka amin'ny fikitihana faran'izay mafy ary miaraka amin'ny fofon'ny tena loza! 😉